Redmi Pad 5G ga-abịa na ihuenyo 90 Hz, igwefoto MP 48 na ndị ọzọ | Gam akporosis
Mbadamba ụrọ nke nwere ihuenyo 90 Hz, igwefoto MP 48 na ibu 30 W? Nke a bụ ihe Redmi Pad 5G ga-etu ọnụ
O doro anya na, dị ka akụkọ ọhụrụ si kwuo, otu n'ime mbadamba ụrọ ndị na-esote n'ahịa a na-agagharị maka mmalite bụ Redmi Kedo akwa 5G.
Nke a ga-abụ mbadamba ihe na-adọrọ mmasị nke nwere ike ịbụ otu n'ime afọ kachasị mma, enweghị obi abụọ. Ma nke a ka anyị na-atụ anya ya n'ihi njirimara na njirimara ọrụ nke ọ ga-etu ọnụ. Na mgbakwunye, site na Redmi, otu n'ime isi ahịa ya kachasị mma ga-abụ ọnụahịa ya.
Nke a bụ ihe ekwuru banyere Redmi Pad 5G
Redmi Pad 5G ga-abụ mbadamba ụyọkọ pụrụ iche n'ezie, nwere àgwà ndị a na-ahụbeghị na mbadamba ọ bụla na ahịa dị ugbu a. Ihe atụ nke a ga-abụ igwefoto Sony nke 48 MP gị.
Ọ maara nke ọma na mbadamba nkume anaghị abụkarị ịkụ nzọ na igwe foto dị egwu. Akụkụ foto nke ndị a dara oke oke ma ọ bụ, ọ bụghị itinye ya dị ala, ikwenye. Mbadamba mbadamba Redmi ahụ ga-esi n'ebe ìgwè mmadụ ahụ pụọ maka ịhọrọ ihe mmetụta igwefoto a kpọtụrụ aha, nke nwere ike soro ya na nke abụọ na-akpalite, mana nke a bụ ihe a na-ekwupụtabeghị ebe ọ bụla.
Ngwaọrụ a ga - ejikwa ihuenyo 90 Hz mee ihe, nke bụ 50% dị nro karịa 60Hz anyị na-achọta ugbu a n'ọtụtụ n'ime smartphones na mbadamba taa.
Anyị ga-enweta a 30W ngwa ngwa na-ebu teknụzụ, nke ga-adọrọ mmasị n'ezie maka ngwaọrụ nke, dabere na ihe edepụtara n'elu, ga-efu 1,999 yuan, ọnụ ọgụgụ nke ihe dịka 260 euro ma ọ bụ 285 dollar na mgbanwe ahụ.
Nkọwa banyere nha ihuenyo ka ga-ama, mana ekwuru ya el Ihe nhazi Snapdragon 765G na njikọ 5G ga-abụ onye na-enye ike na Redmi Pad 5G, nke ekwesịrị igosi ma bido na nke a na-abịa 27 Eprel tinyere mobile Xiaomi Mi 10.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mbadamba ụrọ nke nwere ihuenyo 90 Hz, igwefoto MP 48 na ibu 30 W? Nke a bụ ihe Redmi Pad 5G ga-etu ọnụ
Mmelite nke na-edozi ihuenyo akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke Galaxy S20 Ultra dị ugbu a
Gam akporo 10 mmelite na-abia Nokia 2.3